ဒူဘိုင်းသမိုင်းနိုင်ငံရေးနှင့် Business | Amardeep Brar
ဒူဘိုင်းရှိတရုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသူ Find စေရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
1833 ကတည်းကနန်းသက်အယ်လ် Maktoum မိသားစုဒူဘိုင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့၏ပညာနှင့်တိုးတက်သောခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာ, ဒူဘိုင်းပြုစုထားပါတယ်ကြောင့်အိန္ဒိယခွဲတိုက်ကြီးရန်, နှင့်တောင်အာဖရိကမှအ CIS နိုင်ငံများတွင်အဲဂုတ္တုပြည်ကနေကြက်တစ်ဒေသအဘို့ယခုစီးပွားရေးနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအချက်အချာဖြစ်ပါတယ်။
အယ်လ် Maktoum မိသားစုကနေအဋ္ဌမအုပ်စိုးသောမင်း, နှောင်းပိုင်းသူ့ဖွဲ့ရှိတ် Rashid bin ကို Saeed Al Maktoum, 1958 ကနေဒူဘိုင်း၏အကဲအမှူး - 1990, သနားကရုဏာနဲ့နားလည်မှုနှင့်အတူအာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုလမ်းပြတော်မူ၏။ သူကယနေ့သည်နာမည်ကျော်, သာယာဝပြောတဲ့မြို့တော်သို့ဒူဘိုင်းအသွင်ပြောင်းဖို့လိုအပ်သောဘာသဘောပေါက်လာတယ်။ နှင့်အတူရှိတ် Rashid ဒူဘိုင်းသမိုင်း :
ရှိတ် Zayed bin Sultan Al-Nahyan အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏အသင်းချုပ်တည်ထောင်ခြင်းအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍကစားခြင်းနှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုကြသည်။
သူကဇန်နဝါရီလ 1990 အတွက်ကွယ်လွန်သွားချိန်အထိနိုဝင်ဘာလ 2006 အတွက်ရှိတ် Rashid ၏အသေခံခြင်းပြီးနောက်ရှိတ် Maktoum Bin ကို Rashid Al-Maktoum ဒူဘိုင်းနှင့်ဒုတိယသမ္မတများနှင့်ယူအေအီးဝန်ကြီးချုပ်သူကျင်းပရာထူး၏အနန္တတန်ခိုးရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ 4th 2006 တော်မြင့်သော ရှိတ်မိုဟာမက်ဘင် Rashid Al-Maktoum ရှိတ် Maktoum ဘင် Rashid Al-Maktoum ၏အသေခံအောက်ပါဒူဘိုင်း၏အနန္တတန်ခိုးရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူ၏ဦးဆောင်မှုအောက်တွင်ဒူဘိုင်းမြန်ဆန်စွာကမ္ဘာပေါ်မှာအဓိကမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းဖြစ်လာနေသည်။ မြင့်ရှိတ်မိုဟာမက်ကိုလည်းဒုတိယသမ္မတနှင့်ယူအေအီးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
1st ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 တွင်, နာရီရှိတ် Hamdan ဘင်မိုဟာမက်ဘင် Rashid Al-Maktoum ဒူဘိုင်း၏အိမ်ရှေ့မင်းသားကိုကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူသည်ဒူဘိုင်းရဲ့အလုပ်အမှုဆောင်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်း၏လက်ထောက်အစိုးရသောမင်းတို့နာရီရှိတ် Maktoum ဘင်မိုဟာမက်ဘင် Rashid Al-Maktoum နှင့်နာရီရှိတ် Hamdan ဘင် Rashid Al-Maktoum ဖြစ်ကြသည်။ နာရီရှိတ် Hamdan ဘင် Rashid Al-Maktoum လည်းဘဏ္ဍာရေးယူအေအီးရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းတစ်ဦးထက်ပိုပြောင်းလဲနေသောနှင့်ပိုမိုစုံလင်စီးပွားရေးမှာနှင့်အတူအဓိကစီးပွားရေးစင်တာဖြစ်လာ, နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်။ ဒူဘိုင်းမဟာဗျူဟာမြောက်တည်နေရာအတော်ပင်နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အကြီးမားဆုံး Re-တင်ပို့စင်တာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ဒါဟာအနိမ့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ်နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခြေခံအဆောက်အဦများ, နိုင်ငံတကာအမြင်နှင့်လစ်ဘရယ်အစိုးရမူဝါဒများကြီးမားတဲ့လမ်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်ပါပဲ။ ထိုကဲ့သို့သောကုန်သွယ်ရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ခရီးသွားလုပ်ငန်း, စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများမှန်မှန်ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားပြသခြင်းနှင့်တိုးချဲ့နှင့်အမျိုးမျိုး၏မြင့်မားသောဒီဂရီအောင်မြင်ရန်စီးပွားရေးအကူအညီပေးခဲ့ကြပါပြီ။
ဒူဘိုင်းစီးပွားရေးကိုအကြောင်းကိုနောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရယူစိတ်ဝင်စားသူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့အတွက်စာမကျြနှာသော့ချက်လူမှုစီးပွားညွှန်းကိန်းများအဘို့နောက်ဆုံးပေါ်ဒေတာနှင့်အတူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဒူဘိုင်းစီးပွားရေးနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်လက်ရှိအချက်အလက်များ၏ကျယ်ပြန့်အပါအဝင် "ဒူဘိုင်းလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးညွှန်းကိန်း" မှထုတ်ယူဒူဘိုင်းစီးပွားရေးစာရင်းအင်းများပေါ်တွင်စားပွဲဆံ့။ ဒါ့အပြင်အခြားစာမျက်နှာများတွင်အဆိုပါလပတ်ညွှန်းကိန်းအဖြစ်ဒူဘိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, စက်မှုစီမံကိန်းများနှင့်စီးပွားဖြစ် / စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစင်တာများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မဆံ့။
ဒူဘိုင်းစီးပွားရေးကိုရောနှောပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများများအတွက်စံပြနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရာသီဥတုဖန်တီးကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်, စျေးကွက်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားသာချက်တစ်ခုယှဉ်ပြိုင်ပေါင်းစပ်အတော်ပင်။ တကယ်တော့ဤအားသာချက်များအာရေဗျပင်လယ်ကွေ့ရဲ့ဦးဆောင် Multi-ရည်ရွယ်ချက်စီးပွားရေးစင်တာနှင့်ဒေသတွင်းအချက်အချာမြို့အဖြစ်ဒူဘိုင်းအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်မသာပေမယ့်သူတို့ကကမ္ဘာလုံးရဲ့, ပြောင်းလဲနေသောနှင့်ထွန်းသစ်စစျေးကွက်စီးပွားရေး၏ရှေ့တန်းမှမှာထားပါ။
ဒူဘိုင်း၎င်း၏ရှေးခေတ်စီးပွားရေးနှင့်သင်္ဘောသားအစဉ်အလာနှင့်အတူရှည်လျားအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၏ထိပ်တန်းကုန်သွယ်အချက်အချာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားပြီးနှင့်၎င်း၏ key ကိုပြန်လည်တင်ပို့စင်တာအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ပိုပြီးမကြာသေးမီနှစ်ထဲမှာ, အာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုကြီးထွားလာ, အမြတ်အစွန်းစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများတစ်အရေအတွက်ကအဓိကနေရာဖြစ်လာသည်:
အစညျးအဝေးမြား, ညီလာခံများ, ပြပွဲ
ဒါကအားလုံးကြောင့်ဒူဘိုင်းရဲ့ပူနွေးတဲ့, လူတွေကြိုဆို, ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအဆောက်အဦများနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် farsighted ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်လစ်ဘရယ်စီးပွားရေးမူဝါဒများဖြစ်နိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုယ်နှိုက်၏တိုးတက်သောရူပါရုံကျူးလွန်ခဲ့သော၎င်း၏စီးပွားရေးကိုမျိုးစုံနှင့်ရေနံရောင်းရငွေမှဘဏ္ဍာငွေကျုံ့အပေါ်သို့၎င်း၏မှီခိုလျော့ဖို့စိတ်အားထက်သန်, ဒူဘိုင်းအာရေဗျပင်လယ်ကွေ့ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးစင်တာသို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စတင်လိုက်ပါပြီ။ ဒီဖြစ်ပွားနေသောအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်အထောက်အကူပြုသောအချက်များစဉ်းစားပါ။
ဒူဘိုင်းရဲ့ Key ကိုကောင်းကျိုးများ
I. မဟာဗျူဟာမြောက်တည်နေရာ: ဒူဘိုင်းမြောက်ဘက်-တောင်ဘက်ဝင်ရိုးအပေါ် East-West ဝင်ရိုးပေါ်တွင် Far East နှင့်ဥရောပအကြားအချိန်ဇုန်တံတားနှင့် CIS နှင့်အာဖရိကဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုခံရနိုငျသောစျေးကွက်တစ်ခုတံခါးပေါက်သည်:
• အကြီးစား - ကောင်းမွန်စွာထူထောင်ကုန်သွယ်လင့်များပင်လယ်ကွေ့, အရှေ့အလယ်ပိုင်း / အရှေ့မြေထဲပင်လယ်, CIS, ဗဟိုအာရှ, အာဖရိကနှင့်အာရှ Sub-တိုက်ကြီးဖုံးအုပ်ထားသည့်အိမ်နီးချင်းဒေသတွင်း၌ သာ. ဘီလီယံခန့် 1.5 ထက်လူတို့နှင့်အတူတည်ရှိ;
• ကြီးထွားလာ - ဒူဘိုင်းစုစုပေါင်းရဲ့နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေး 11 ကတည်းကတစ်နှစ်လျှင် 1988% ကျော်အားဖြင့်ပျမ်းမျှစိုက်ပျိုးခဲ့ပြီးဒေသဆိုင်ရာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့်လွတ်လပ်နောက်ထပ်ဝယ်လိုအားမြှင့်တင်ရန်သင့်သည်,
• သာယာဝပြောတဲ့ - ဗျူဟာမြောက်စျေးပေါစွမ်းအင်နှင့်မူလတန်းလူမီနီယံ၏လုံလောက်သောထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်အတူကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးဒေသများနှင့်ကောင်းစွာစုံတစျဦး၏အလယ်၌တည်ရှိသော buoyant ဒေသခံစီးပွားရေးကို; ထို့အပြင်အရေးပါသောအစိုက်ပျိုးရေးပို့ကုန်ကုန်စည်၏အဓိကဒေသဆိုင်ရာပေးသွင်းကပ်လျက်;
• ပိုမိုစုံလင်လာ - မတူညီကြခြင်းနှင့်သိသာထင်ရှားသောတင်သွင်းလိုအပ်ချက်များကိုထုတ်ကုန်ပေးသွင်းနှင့် re-တင်ပို့သူများအဘို့အခွင့်အလမ်းများကို generate;
•သုံးခွင့် - 120 ရေကြောင်းလိုင်းများကျော်အားဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့် 85 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနေရာများကျော်ဖို့ 130 လေကြောင်းလိုင်းများမှတဆင့်နှင့်ဆက်စပ်;
• ဖွင့်လှစ် - အဘယ်သူမျှမလဲလှယ်ထိန်းချုပ်မှု, ခွဲတမ်းသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်မှုအတားအဆီးများ။
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ဉာဏ်သည်သူ၏စကားပြော skis သို့မဟုတ်အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှုအတွက်မဟုတ်ပါဘူး, အကောင်းဆုံးဥပမာဆရာဝန်များကအဆိုပါဆေးဝါးကျွမ်းကျင်နားလည်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားထားတဲ့အဆိုးဆုံးလက်ရေးရှိသည်ဖြစ်သည်။
ဒူဘိုင်းတစ်ဦးအနိမ့်ရာဇဝတ်မှုနှင့်နိုင်ငံရေးအရ-တည်ငြိမ်တိုင်းပြည်ဖြစ်သောယူအေအီး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ယူအေအီးဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုအတော်ပင်။ ဒါဟာခေတ်မီဘဏ်စနစ်ကျယ်ပြန့်အကြွေးအဆောက်အဦများနှင့်လုံလောက်သောငွေဖြစ်လွယ်တပ်ဆင်ထားကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုရဲ့ထွန်းသစ်စမြို့တော်စျေးကွက်ဦးဆောင်-အစွန်းနည်းပညာများနှင့်အသံကစည်းမျဉ်းစနစ်များ၏အခြေခံပေါ်တွင်တည်ဆောက်နေကြသည်။ အစိုးရအဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအပါအဝင်လိုလားသောစီးပွားရေး, လစ်ဘရယ်စီးပွားရေးမူဝါဒတစ်ခုရှည်လျားတသမတ်တည်းကတိကဝတ်ရှိပါတယ်။
တည်ငြိမ်ပြီးသဟဇာတစက်မှုဇုန်ဆက်ဆံရေးကနေယူအေအီးအကြိုးခံစားခှငျ့။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကောင်းစွာသတ်မှတ်, အသံဥပဒေရေးရာမူဘောင်များနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုစည်းမျဉ်းများရှင်းရှင်းလင်းလင်းအစုံရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားများပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီများ, အကိုင်းအခက်နှင့်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့်အခမဲ့ဇုန်လုပ်ငန်းများ၏ကိုယ်စားလှယ်ရုံးဘို့% 49 မှဒူဘိုင်း၏အာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုအတွင်းနှင့်တက်ထူထောင်န့်အသတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီများအတွက် 100% အထိပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများခွင့်ပြုထားပါသည်။ ဤအအချက်များအားလုံးသည်ဒူဘိုင်းရဲ့ Moody ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်ပုံသေဝင်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တာဝန်ပေးအပ်ခံရအတွက်အပြုသဘောရောင်ပြန်ဟပ်။
ဒူဘိုင်းရဲ့စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်စီးပွားရေးဆွဲဆောင်ဖို့ပွင့်လင်းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အစိုးရထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏စည်းမျဉ်းလှုပ်ရှားမှုများနိမ့်ဆုံးမှထားရှိမည်ပါပြီ။ (ဒူဘိုင်းအတွင်းထုတ်ပေးအသားတင်အမြတ်အပေါ် 55% ၏ပြားချပ်ချပ်နှုန်းကိုပေးဆောင်ကြောင်းနိုင်ငံခြားဘဏ်များတစ်ပြားချပ်ချပ် 20% နှုန်းနှင့်အကိုင်းအခက်များပေးဆောင်ကြောင်းရေနံကုမ္ပဏီ မှလွဲ. ) ကော်ပိုရိတ်အမြတ်အစွန်းသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝင်ငွေမတိုက်ရိုက်အခွန်များရှိပါသည်။ အကောက်ခွန်လုပ်ငန်းတာဝန်များအများအပြားကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်အတူ 4% မှာအနိမ့်များမှာအရင်းအနှီးနှင့်အမြတ်အစွန်းများ 100% ပြန်ပို့ခွင့်မရှိနိုင်ငံခြားငွေထိန်းချုပ်မှု, ကုန်သွယ်ရေးခွဲတမ်းသို့မဟုတ်အတားအဆီးများကိုနှင့်တည်ငြိမ်ငွေလဲနှုန်းအမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာနှင့်ယူအေအီး Dirham (အမေရိကန် $ 1.00 အကြားရှိတည်ရှိနေကြသည် = AED 3.678) ။ လစ်ဘရယ်ဗီဇာမူဝါဒများနီးပါးလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအမျိုးမျိုးသောကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ဆင့်၏ပြည်ပရှိအလုပ်သမားများ၏လွယ်ကူသောတင်သွင်းခွင့်ပြုသည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဆက်သွယ်ရေး, စွမ်းအင်နှင့်စက်မှုအခြေခံအဆောက်အဦအတွက်အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၏ဒူဘိုင်းရဲ့တမင်မူဝါဒကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးအခြေခံအဆောက်အအုံအဆောက်အဦ၏တဦးတည်းရှိသည်ဖို့က enabled ပြီ ဒါကြောင့်လည်းသိသိသာသာနှစ်ဦးစလုံးသည်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရန်၎င်း၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစည်းစိမ်ချမ်းသာများနှင့်ဆွဲဆောင်မှုမှလှူဒါန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါအာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုခုနစျပါးစက်မှုဇုန်ဧရိယာများ, တဦးတည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပန်းခြံနှင့်နိုင်ငံတကာဂုဏ်ထူးနှစ်ခုကမ္ဘာ့အဆင့်မီဆိပ်ကမ်းတစ်ခုအဓိကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နှင့်ကုန်တင်ကျေးရွာ, ခေတ်မီအဝေးပြေးလမ်းမကြီးကွန်ရက် State-Of-the- သုံးခုအလွန်အမင်းအောင်မြင်သော, အထူးပြုအခမဲ့ဇုန်၏ကွန်ယက် features ထိရောက်မှု, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ယုံကြည်စိတ်ချရ, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အရွယ်အစားကယ်နှုတ်တော်မူသမျှသောအရာ၏အနုပညာဆက်သွယ်ရေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအာဏာနှင့် utilities ။
ယင်း၏ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအခြေခံအဆောက်အဦများ Complementing ဒေသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာကုန်တင် forwarding, ရေကြောင်းကုမ္ပဏီများ, အာမခံပေါင်းအဓိကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဟိုတယ်များ, ဘဏ်များနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများ, ရှေ့နေများ, စာရင်းကိုင်ကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ, ကြော်ငြာအေဂျင်စီထိပ်တန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြပွဲနှင့်ကွန်ဖရဦးဆောင်တပ်ဆင်ထားတဲ့ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည် အဆောက်အဦးများ, အရည်အသွေးမြင့်ရုံးခန်းများနှင့်လူနေအိမ်နေရာထိုင်ခင်း, ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားဆေးရုံများ, ကျောင်းများ, စျေးဝယ်စင်တာများနှင့်အပန်းဖြေနေရာဌာန။ အခမဲ့ဇုန် Website များ: ဒူဘိုင်း လေဆိပ် အခမဲ့ဇုန် Jebel Ali အခမဲ့ဇုန်ဒူဘိုင်းမီဒီယာစီးတီးဒူဘိုင်းအင်တာနက်ကိုစီးတီး
ဒူဘိုင်း၌ထ setting နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများသည်နိုင်ငံတကာတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်မရရှိနိုင်ပါသိသိသာသာကုန်ကျစရိတ်အားသာချက်များကိုရယူနိုငျပါသညျ။
အပြိုင်အဆိုင်တင်သွင်းတာဝန်များကို (များစွာကိုကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်အတူ 4%),
အပြိုင်အဆိုင်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ် - လုပ်သားအင်အား Multi-lingual နှင့်ကျွမ်းကျင်ဖြစ်ပါသည်,
အမြင့်သို့မဟုတ် Low ယှဉ်ပြိုင်စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်,
ကော်ပိုရိတ်အမြတ်အစွန်းသို့မဟုတ် (ရေနံကုမ္ပဏီများနှင့်နိုင်ငံခြားဘဏ်များ၏အကိုင်းအခက် မှလွဲ. ) ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝင်ငွေအခွန်မရှိပါ။ သင်က "ကုန်ကျစရိတ်စီးပွားရေးပွုလုပျခွငျး၏" ကဏ္ဍအောက်ရှိစားပွဲရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။
ဘဝမြင့်မားအရည်အသွေး, Excellent ကနေထိုင်မှုအခြေအနေများ:
ဘဝမြင့်မားအရည်အသွေး, Excellent ကနေထိုင်မှုအခြေအနေများ - Credit: https://www.instagram.com/hhshkmohd/
ဒူဘိုင်းရဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့ဟိုတယ်, လူနေအိမ်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဂုဏ်သတ္တိများ, အပန်းဖြေခြင်းနှင့်အပန်းဖြေအဆောက်အဦအဖြစ်အိမ်ခြံမြေအတွက်အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှပ်နှံခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အချက်များတစ်အရေအတွက်မှလှူဒါန်းခဲ့ပါပြီ အာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုရဲ့ အသက်တာ၏အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်များစွာအတုယူဖို့အတှကျမော်ဒယ်တည်နေရာအောင်သာလွန်လူနေမှုအခြေအနေများ။ သူများသည်အချက်များအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံအဆောက်အဦ, အနိမ့်ပြစ်မှု, သန့်ရှင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်, သည်းခံစိတ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမတူကွဲပြားမှု, နာမည်ကျော်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ခေတ်သစ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေး, လူသုံးကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ကျယ်ပြန့များ၏ရရှိနိုင်မှု, ပျော့ဆောင်းရာသီ, စင်ကြယ်သောစွန်ပလွံ fringed ကမ်းခြေပါဝင်သည်။
ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူတန်းစားတစ်ဦးကုန်သွယ်လှုပ်ရှားမှု၏ရှည်လျားသောအစဉ်အလာနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလေ့အကျင့်နှင့်ပြည်နယ်-Of-The-Art နည်းပညာများမှကျယ်ပြန့်ထိတွေ့မှုရှိပါတယ်။ ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်များပြီးသားစီးပွားရေးအမျိုးမျိုးသောကဏ္ဍများအတွက်အောင်မြင်သော franchise နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်နှင့်အတူအတွေ့အကြုံ, လိုင်စင်, ဖက်စပ်, စသည်တို့ရရှိခဲ့ပါပြီ။
ကျယ်ပြန့်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်ကွန်ယက် & ပို့ကုန်နှင့် Re-ပို့ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ဗိုလ်မှူးအောင်မြင်မှုများ:
ဒူဘိုင်း 179 မှတိုးချဲ့တစ်ခုကျယ်ပြန့်သည့်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုကွန်ယက်ကိုအရှင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအစုစုတို့အတွက်အလားအလာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်များတွင်တစ်ခုကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်မှုရာပူဇော်သက္ကာကိုဤသို့ဖော်ပြသည်ပါတယ်။ ယူအေအီးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်, ဒူဘိုင်းကိုလည်းဟောင်ကောင်နှင့်စင်္ကာပူအပြီးကမ္ဘာ့တတိယအကြီးဆုံးပို့ကုန်များနှင့်ပြန်လည်တင်ပို့စင်တာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
High Quality ၏ကျယ်ပြန့ထုတ်လုပ်ယှဉ်ပြိုင်ပို့ကုန်ထုတ်ကုန်: ဗိုလ်မှူးအကျိုးအမြတ်ပြီးသားလူမီနီယံ ingots ၏အမြတ်အစွန်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပို့ကုန်အတွက်ကြပြီ, သတ္တုထုတ်ကုန်များ, ချည်မျှင်နှင့်အထည်နှင့်အဆင်သင့်လုပ်အဝတ်ကို, ရွှေနှင့်ကျောက်မျက်, ပြင်ဆင်ထားစားသောက်ကုန်များ, လူသုံးကုန်အီလက်ထရွန်နစ်, သန့်စင်ပြီးရေနံ, ဓာတုနှင့်သတ္တုမဟုတ်သောတွင်းထွက်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များလုပ်ကြံ။ ထောက်ခံ, စီးပွားဖြစ်စက်မှုဇုန်, နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးအကြောင်းအချက်တွေကအခြားကုန်ထုတ်လုပ်မှုခွဲကဏ္ဍများဤအကျိုးအမြတ်၏ဖြစ်နိုင်သောတိုးချဲ့မှုကိုအရပျ၌လက်ရှိဖြစ်ကြသည်။